कहिल्यै पनि नमस्कार नगर्नुस् यी ७ व्यक्तिलाई – Rapti Khabar
तपाईंका पैतालामा यस्ता आकार त छैनन्, हुनुहुनेछ भाग्यशाली
विज्ञानको विकाससँगै हामीले शास्त्रमा भनिएका कुरालाई कम विश्वास गर्न थालेका छौं । हिन्दू परम्परामा भने अझै पनि शास्त्रलाई विश्वास गर्ने गरिन्छ ।
समुद्र शास्त्रका अनुसार हाम्रा शरीरमा भएका विभिन्न रेखा र बनोट हेरेर मान्छेको भाग्य र स्वभावबारे जान्न सकिन्छ ।
शास्त्रका अनुसार यदि पैतालामा हुने चिह्नले पनि मानिसको भाग्यका बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ ।
यदि खुट्टाका् कान्छी औंलाको फेदबाट माथितिर रेखा गएको छ भने त्यस्ता व्यक्ति भोगी र विलाशी हुने शास्त्रमा उल्लेख छ । यस्ता व्यक्ति समाजमा पनि प्रतिष्ठित हुने, धन कमाउने र भाग्यमानी हुने बताइन्छ ।
यदि कुनै व्यक्तिको पैतालाको मध्य भागमा वृत्त आकार छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरु धनी हुने बताइन्छ । यस्ता व्यक्तिलाई धन कमाउन खासै मेहनत गर्न नपर्ने समुद्र शास्त्रमा उल्लेख छ ।
यदि तपाईंको पैतालामा त्रिशुलको आकार छ भने तपाईं निकै भाग्यशाली हुनुहुन्छ । यस्ता व्यक्तिले सरकारी जागीर खाने या उच्च पद प्राप्त गर्ने सम्भावना पन उत्तिकै हुन्छ ।
त्यति मात्र होइन, यदि कसैको पैतालाको बुढी औंलाको फेदमा स्वस्तिक चिह्न छ भने ऊ महामानव हुन्छ । यस्ता भाग्यमानीलाई विश्वले चिन्नेछ ।
पैतालामा टी (अङ्ग्रेजी अक्षरको) जस्तो आकृति हुनेहरु पनि भाग्यशाली हुने शास्त्रमा उल्लेख छ । यस्ता व्यक्तिले व्यापारमा निकै सफलता पाउँछन् ।
त्यस्तै गरी जसको पैतालाको मध्य भाग्यमा अधचन्द्राकार रेखा हुन्छ, त्यस्ता व्यक्ति धनी हुन्छन् । तर, धनको खासै महत्त्व राख्दैनन् ।
धेरै कफी पिउने बानी छ ? सावधान ! गम्भीर असर पर्नसक्छ
कोरोनाबाट बच्न जथाभावी जडिबुटी खाँदै हुनुहुन्छ ? सावधान ! हानी पुर्‍याउन सक्छ
कोरोना भाइरस संक्रमणका बेला प्रतिरोधी क्षमता बढाउन खाइने जडिबुटी सन्तुलित रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । चिकित्सकको सल्लाह र सुझाव विना यसको अधिक मात्रामा प्रयोग गर्दा हानिकारक हुने चिकित्सकको सुझाव छ । बेसार, गुर्जो, तुलसी, मरिच, अदुवा, टिमुरलगायत जडिबुटीको प्रयोग हावापानी, भौगोलिक अवस्था र प्रयोगकर्ताको शारीरिक क्षमताअनुसार मात्रा मिलाएर प्रयोग गर्न उनीहरूले सुझाएका हुन् […]
लसुनले थुप्रै रोगहरुबाट बचाउँछ । बिहान सबेरै लसुनको सेवन गुणकारी मानिन्छ । खाली पेटमा दुई वा चार केस्रा लसुनको सेवनले मधुमेह, जोर्नी दुखाई जस्ता समस्यामा आराम हुन्छ । यतिमात्र होइन लसुनले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि वृद्धि गर्छ । लसुनमा थुप्रै गुणहरु हुन्छन् । यसले शरीरलाई निरोगी राख्न सहयोग पुर्याउँछ । र शरीरलाई उर्जा पनि प्रदान […]
कसैले काउकुती लगाउँदा किन हाँसो लाग्छ ? यस्तो छ कारण